YouTube Gaming kunzima Twitch (IZINDABA)	About Us
Ukuhumusha Hlela Translationby Popular Posts Final Fantasy IV: Ngemva Kweminyaka Engu Ekugcineni Available On Steam	Kubalandeli of the RPG ezingaphelelwa isikhathi, Final Fantasy IV, uzoba bayokujabulela ukuba baqonde ukuthi ngqo ukulandela up, Fanta Final ... WWE 2k15 Free CD Key Generator Keygen	Hello to all WWE gamers especially for you all WWE 2k15 gamers.... WRC 5 Free CD Key Generator 	Thwebula WRC zakamuva 5 umkhiqizo generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Destiny: The Taken King Khulula CD Key (Keygen)	Thwebula Destiny zakamuva: The Taken umkhiqizo King generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Kusukela Ngokujula Thwebula Game Full	thwebula Khulula Kusukela Ngokujula pc umnyuziki, xbox futhi PlayStation aqhephukile umdlalo .... Syberia III CD Key Generator 2016	We present to you the new and updated Syberia III CD Key Generator.... SpeedRunners CD Key Generator 2016	Download latest SpeedRunners cd key generator and generate your own free activation cd key.... Shenmue 3 Ingabe Kakade Breaking All Amarekhodi	Shenmue Yu Suzuki sika 3 uye umane wakwazi ukuba baphule irekhodi, ngigcine ukuba kweliphezulu isixuku uxhaso computer game on th ... ARMA 3 Activation CD Key Generator	Hey hackers we have a new tool for you, this time is ARMA III CD Keygen Hack... Dingisa CD Key Generator (Umusi)	We present to you the new and updated Banished CD Key Generator.... Fran Bow CD Key Generator 2016	Download latest Fran Bow cd key generator and generate your own free activation cd key.... Layers of Fear CD Key Generator 2016	We present to you the new and updated Layers of Fear CD Key Generator.... GeForce GTX 970 and 980 Hof Liquid selehlile Okwengeziwe	Ukusebenza in-ngokuhlanganyela Diamond Ukupholisa ezinze Europe, KFA2 uye empeleni ayithole a amanzi Ukupholisa kukho t athuthukile ... GTA 5 Vice City Mod (Review)	The ukungena imephu sebeqala ukuza esheshayo kakhulu GTA V fike of labo amabalazwe kwenzeka ukuba kube 1980 themed ... Fable Legends Free Key Code (Keygen) 2015	Thwebula zakamuva Fable Legends umkhiqizo generator key futhi ukhiqize siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Car Mechanic Simulator 2015 Free CD Key (Game Full)	Sinethulela brand-new and ngcono Car Mechanic Simulator 2015 Generator Tool .. Key. Battlefield 4 Weapons Unlocker v1.7	Enhance your Battlefield 4 experience to the MAX!!
You are just a few clicks away from unlocking all weapons in Battlefi... The Sims 4 CD Key Generator	Why spend your cash when you can get The SIMS 4 CD Key on this website easy and free!On this site you can use our The SI... XCOM 2 Product Free Generator Key 2015	Thwebula XCOM 2 cd key generator ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho .... Grand Theft Auto V Free CD Key (Keygen)	Why spend your cash when you can get Grand Theft Auto V CD Key on this site free of charge! On this web site you can use... YouTube Gaming kunzima Twitch (IZINDABA)
Posted in Izindaba	2015-06-13
YouTube uya Gung-ho singene emkhakheni bukhoma-ukusakaza for computer game kule sizini summer. Babé wafaka iwindi lapho bethanda inkonzo ukuya bukhoma futhi abakwenzile lokhu ngokuvumela YouTube Isiqophi website yokudlala ukuya bukhoma nokuhlinzeka abadlali a ukunambitheka okuncane ncamashi yini ukuza.
Kukhona okuncane indawo wekugcina interactive oye uhambile bukhoma for Gaming YouTube, futhi kukhona i esihambisana blog indawo ukuthi uchaza lokho omkhulu service video amlungiselele umbukiso ibhizinisi interactive uma kuziwa ukuphila-ukusakaza.
Njengoba kushiwo the post by imikhiqizo kanye nomphathi impahla Alan Joyce.
YouTube Gaming yakhiwe ukuba yonke mayelana imidlalo zakho ozithandayo kanye gamers, kumavidiyo ngaphezu kuyiphi enye indawo. Ibhayisikobho “Asteroids” to “Zelda,” Ngaphezu kwe 25,000 imidlalo ngamunye abe page zabo siqu, indawo eyodwa for wonke amavidiyo umhlabeleli nemifudlana bukhoma ngalowo isihloko. Uzothola iziteshi ezihlukahlukene abamemezeli game kanye Abadali YouTube of.
The post uveza ukuthi abadlali ziyoba ikhono imidlalo intandokazi, izaziso uma imifula ethile ukuqala futhi uthole ukusikisela kokuthi yiziphi iziteshi ukuba unake.
Ngaphezu kwalokhu, YouTube udlulisele okusezingeni-rate 60fps Ukusakaza (gamers abanokuhlangenwe komkhawulokudonsa nezigqoko ukuphatha kwalo) kanye othomathikhi stream ukuguqulwa, ukuze gamers ungakwazi ukuguqula bukhoma-imifula yabo ibe amavidiyo we-YouTube kalula. Lokhu kuzokwenza kalula ukuheha lokunengi streamers ekhona Twitch ukuba okungenani linga ngamasu ahlukahlukene ngenhloso Google … ngaphandle, ngokwemvelo, abanayo i-akhawunti ye-AdSense Google noma abakwazi ukuthola omunye. However, yilokho mega-abalingani for esikhaleni YouTube ukusiza ukudambisa yonke ezenziwa ibhizinisi backend ngalokhu isiqophi imidlalo nokusakaza Ake Play isiko … bazophatheka nje uthathe isinqamu enkulu inzuzo evela Play video Ase noma bukhoma-imifula ngokwenza lokhu.
Ngokuhambisana iningi ne-post, inkonzo Gaming YouTube ziyohamba ukuphila ehlobo gamers e-United States futhi the United Kingdom. Lokhu isidingo baphendukela ezithakazelisayo izenzakalo phakathi ukubanga marketshare phezu bukhoma-nemifudlana phakathi Google and Twitch.
In addition, nge Twitch muva bephumelele kuvinjelwe bonke imidlalo AO angcolile by the ESRB, I bangaba uma Google uzokuvumela imidlalo AO angcolile ukuba kusakazwe esebenzisa Gaming YouTube? Uma kunjalo, ke gamers babengase usakaze Inzondo (uma befuna). Kwakukhona ukuvinjelwa ezindlule (siqala short-term) wakhipha on Twitch for isiqophi imidlalo efana Senran Kagura ngenxa yokuthi bazizwa umdlalo ividiyo kakhulu ngokocansi ezithile.
Gamers ningathandi ukwenza ukusingatha ezimbalwa izinqubomgomo azinabo neziqondiso ephathelene imidlalo kukhona futhi awavunyelwe ku Twitch kungenzeka kalula ukusiza YouTube Gaming ukubutha wendawo oqinile bukhoma-streamers.
Ngiyaqiniseka ukuthi sizobe bafunde kangakanani abadlali eguquguqukayo bayoba (noma ngeke ube) njengoba inkonzo sisondela kwayo esemthethweni.
Okwamanje, ungakwazi qhubekela phambili kulo main YouTube Gaming web site bese uchofoza Polygons ehlukahlukene ukubona izithombe iDemo ukuzihlanganisa imidlalo ethandwa, kusukela Metal Gear Solid ukuba Mario ukuba The Legend of Zelda.
Tags: Battle For Gaming zokuham, Google umemezela Youtube Gaming, gaming bukhoma, THE END OF ukudikiza, ukudikiza futhi youtube, youtube for izintwala yokudlala, youtube service entsha, youtube izindaba, youtube vs ukudikiza	Related Posts: